Miverina any amin'ny mpivavaka mpangataka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Miverina any amin'ny mpivavaka mpangataka
Miverina any amin'ny mpivavaka mpangataka
Novambra 15, 2019
Salamo 35: 8 Aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy; ary aoka ny fandrika harerany no hahatratra azy;.
Androany isika dia hijery lohahevitra hivavaka izay mitondra ny lohateny hoe, Back to Sender Prayer point. Ireo laharam-bavaka ireo dia foto-bavaka lehibe indrindra ao amin'ny sekolin'ny ady ara-panahy. Miverina amin'ireo hetsi-bavaka mandefa dia midika fotsiny ny famerenany azy ireo ny zana-tsipìka ratsy avy amin'ny devoly sy ny mpiasany. Midika izany hoe hamadika ny didim-pitsatan'i satana rehetra manoloana ny fiainanao ary aleo miverina any amin'ny mpandefa azy izy io. Ao amin'ny Deoteronomia 28: 7, dia nilaza tamin'ny zanany Andriamanitra fa ny fahavalonao dia ho avy hiady aminao amin'ny fomba tokana, fa mandositra fomba fito. Toy izany koa, anio, ny zana-tsipìka ratsy rehetra nalefanao dia hiverina amin'ny mpandefa fito impito amin'ny anaran'i Jesosy.
Miverina any amin'ireo teboka vavaky ny mpandefa dia teboka vavaka manafintohina. Tsy afaka mihidy ny vavanao ianao ary mijery ny devoly manaratsy anao. Ao amin'ny Marka 11:24 dia nilaza i Jesosy fa hanana izay lazaintsika isika fa ny vava mikatona dia anjara mikatona. Rehefa mandefa ratsy ny devoly arrow na didim-pitsarana ratsy momba ny fiainanao, tsy maintsy averinao any amin'ny mpandefa izany. Rehefa ny ratsy fanahy manao an teny ratsy manohitra anao, tsy maintsy averinao aminy avy hatrany izy ireo. Ao amin'ny fanjakan'ny fanahy, izay teny rehetra tsy lavinao, midika izany fa nanaiky azy ianao. Izay teny tsy ekenao dia manan-jo hiasa amin'ny fiainanao. Saingy anio ireo teboka vavaka fandefasana mpandefa ireo dia hampahiratra ny masonao hiverina any amin'ny devoly ireo entana ratsy rehetra napetrany taminao. Hitako ny fahavalonao mandositra ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ny hery ratsy rehetra, misotro ny rononon'ny fiainako, mandoa azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny fahazavan'Andriamanitra, mamirapiratra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy (mandany 30 minitra amin'ity).
3. afo ny Fanahy Masina, doro ny aretim-panjakan'i satana rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ray Tompo ô, omeo ahy fahalalana, fahendrena ary fahazavan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Mahazo hery ho tonga lehibe amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
6. Ray Tompo ô, ataovy batemy amiko amin'ny sitrakao masina amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ry Tompo, tsindrino ao am-pon'ireo izay hanampy ahy, amin'ny anaran'i Jesoa.
8. Amin'ny anaran'i Jesosy, fanahin'ny fahadisoana, tsy hahita fahombiazana ianao amin'ny fiainako.
9. Ry Ray Tompo ô, ampahafantaro azy fa Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra iainako aho.
10. Foanana ny fisehoan'ny nofin'i satana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Raiko Tompo, hosory ny afo ny fivavahako amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Tompo ô, avelao aho hikasika ny lanitra anio ary aoka ny lanitra hikasika ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. na inona na inona amin'ny fiainako izay hanakana ny fivavahako, ny ran'i Jesosy, esory io.
14. Nahazo hery hiakatra amin'ny elatra toy ny voromahery aho, amin'ny anarana mahery Jesosy.
15. Raiko, avelao ny herin'ny fitsanganan'i Jesoa Kristy Tompontsika hanangana ny hery rehetra sy ny hatsaram-panahy maty amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Manafaka ny tenako amin'ny fonja satana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
17. Izaho dia mamoaka ny hery ratsy rehetra miasa amin'ny asan'i Jesosy.
18. Izay fahefana mifanohitra rehetra ao amin'ny fianakaviako, mamaha ny fiadananao mandra-pibebahanao sy hamelanao ahy irery, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ny toby satana rehetra, izay manamafy ahy, fampielezana, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Izaho dia mandà ny fanahin'ny làlan-jiro rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Izay fanjakana ratsy rehetra, izay manjaka amin'ny fiainako dia ho fongana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Amin'ny herin'Andriama- nitra, tsy hisy fiaraha-mikambana ratsy hihazona ny manodidina ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Ny demony rehetra, manjaka amin'ny fiainako, miondrika, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Ny ezaka satana rehetra hampihemotra ny tanjoko, sorena, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny faminaniana ratsy rehetra momba ny fiainako, tsy mitsoaka amin'ny anaran'i Jesosy.
26 Ry Ray Tompo ô, aparitaho amiko ny momba ireo fahavaloko miafina rehetra, amin'ny anarana Jesosy.
27. Izay rehetra maniry ahy dia tsy mahazo manelingelina azy ireo, amin'ny maha-mararin'ny anaran'i Jesosy.
28. Ny rantsantanana ratsy rehetra, manondro ny fandrosoako, ho maina amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Ny ozona sy ny fandringanana an 'Andriamanitra amin'ny zava-maniry ratsy rehetra eo amin'ny fiainako ary andidiako azy ireo malazo, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Nariako ny eritreritra diso foana tamin'ny fahombiazako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraFamonganana ny zava-maniry fambolena rava
Next lahatsoratra34 Ny laharam-bavaka mba hahombiazana amin'ny fanompoana
Wung mamono 16 Novambra 2019 Amin'ny 1:14 maraina
Ben Olie 19 Novambra 2019 Amin'ny 9:20 maraina
Pastorio ny vavaka ataonao, Misaotra an'Andriamanitra anie ianao sy ny fianakavianao
Edwin Luiten 28 Febroary 2020 Amin'ny 12:19 maraina
Misaotra pastera amin'ny vavaka. Mila vavaka fiarovana sy fahendrena ho an'i Muriel sakaizako aho, sitrana tamin'ny fiankinan-doha GHB taorian'ny vavaka nandritra ny 3 andro, famelana heloka. Ankehitriny dia mandray ny andraikiny ny fahavalo… Somary tompon'andraikitra ihany aho satria niady tamina ady tsy fitiavana. Nodinihiko Andriamanitra Thuis, ary tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny Alahady dia nahazo vavaka tamin'ny alalàn'ny voninahitra aho tamin'ilay serivisy… nefa tsy nahalala ny toe-javatra nisy ahy, dia nilaza aho fa nahazo satrom-pitiavana..Tomany aho…
Azafady, mivavaha ho azy, fa ho hitan'izy ireo fa ny lehilahy izay eo aminy izao dia mandray ny fitahiany ho azy. Mahazo fahitana 20-20 sy saina mazava izy.
Hotahian'Andriamanitra daholo ianareo… izay hivavaka ho azy.
Lawretta 16 jona 2020 Amin'ny 12:39 hariva
Amena ao amin'i Jesosy tsy misy fetra
Elizabeth Pizana 30 jona 2020 Amin'ny 4:30 hariva
Salama ny anarako dia Elizabeth, ary tena mila fanampiana amin'ny mpiara-monina ratsy fanahy manafika ahy aho. Misaotra anao.
Andriambavy Nahn 10 Jolay 2020 Amin'ny 11:54 maraina
Izaho dia Princess Nahn avy any Liberia, ny olon'ny General manager ahy dia lasa olana amiko tany amin'ny toeram-piasako, halany daholo izay ataoko, hoy izy nangataka ahy hiala amin'ny orinasa
Mila tanana manampy amin'ny vavaka 🙏🙏🙏 aho
Anonymous 14 Jolay 2020 Amin'ny 6:27 hariva
Azafady mba ataovy am-bavaka aho .. misy ny famosaviana ratsy atao amiko ary voatery mampiasa ody aho mba hiarovana nefa tsy te .. mino ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavany famindram-po famindram-po sy fiarovana aho, fa izaho kosa mila fanampiana..mahafantatra aho fa tsy mety izany, mahatsiaro tena ho meloka aho isaky ny avy nefa terena mafy aho hanao izany ..
Hingariana INGA 15 Jolay 2020 Amin'ny 4:50 maraina
Mivavaka ho ahy ny pasitera, tompoko manala ny fiainako, manala ny tendrombohitra rehetra manakana ny fiainako, mamono ny fiadiana ratsy rehetra atao amin'ny fiainako, manafaka ahy amin'izany ny tompoko ary mamerina azy hiverina amin'ny mpandefa anarana jesus!
Jacob Musa Moiforay 18 Jolay 2020 Amin'ny 5:29 hariva
Jeremiah vivian 2 aogositra 2020 Amin'ny 11:00 hariva
Misaotra noho ny vavaka nataonao tompoko Tiako be izy ireo .Mba azafady tompoko fa maika ny vavakinao ry zareo dia ity rangahy ity izay niahiahy aho fa nalainy ny patalohako ary tsy fantatro izay tiany hampiasaina amin'ny anarako hoe Jeremiah Vivian misaotra tamin'ny vavaka nataonao tompoko, hitahy anao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra.
Inga 10 aogositra 2020 Amin'ny 5:32 maraina
pasitera, mivavaha ho ahy, hahasitrana amin'ny fanaintainan'ny vanim-potoana, fanaintainan'ny sandry, tompoko, manasitrana ny vatako rehetra amin'ny aretina rehetra, manasitrana ny aiko, tompoko azafady manala ny fiainako, manala ny aiko, hamaha ny aiko, amin'ny 2020, misokatra ny pls Tompoko fiainana, afaho amin'ny tendrombohitra ratsy rehetra, amin'ny androm-piainako, manafaka ahy amin'ny ozona, mamerina ny fandavana, badluck, maneso, tompoko manampy ahy amin'ny 2020, pls mihaino ny fivavahako, ampio aho ho ahy ilay lehilahy avy amiko. iray noforoninao ho ahy hanambady ahy, pls esory ny sakana ratsy rehetra, izay manakana ahy tsy ho hitan'ny adamiko, tompoko manampy ahy ny olon-droa hipetraha, ampio aho ilay lehilahy amin'ny 2020, ampahirato ny masony hahita ahy, ampio aho a mpiasan'ny karama mandray andraikitra / admin, mamorona ny lahatsoratro ao amina compte tsara miaraka amin'ny ppl tsara hiara-miasa, tompoko manampy ahy, sokafy ny fiainako, pls miaro, mitarika, hiaraka amiko, ataovy ny mahamenatra ahy, tompoko ny faniriana ratsy , fasana mihady ho ahy izy ireo, avelao hianjera ao anatiny izy ireo, ampio aho tompoko amin'ny 2020, pls henoko ny fangatahako, ampio aho hanana fo tsara, ataovy ahy ny zanak'andriamanitra tsy voafora, tompoko pls manampy ahy amin'ny 2020, dia h Izaho manadio, tompoko pls manampy ahy amin'ny anarana jesosy amena!
Aisy 21 Novambra 2020 Amin'ny 4:59 maraina
Bonjour pasteur, j'aimerai que vous priez pour moi et les membres de ma famille, les gens en veulent à nos vies des parents jusqu'à moi et mes deux frères. Pasteur on a vraiment besoin de vos prières, aider nous les vaincre.
Simon Mfon 31 Janoary 2021 Tamin'ny 11:07 maraina
Mpitandrina, azafady mba mivavaha mba hamirapiratra indray ny voninahitro ary ho tafarina ny zava-bita.
Raajini S da Veiga 7 aprily 2021 Amin'ny 9:53 maraina
Ry pasitera malala,
Salama maraina, mila fanampiana aho amin'ny fanafihan'ny zokiko vavimatoa Marilyn, herson Jonathan ary ny sipany Grisha, ary koa Louella zandriko vavy, voaozona aho noho ny momba momba ny kiboko, ozona noho ny fikorontanana ara-bola ary fanafihana ara-bola tsy misy farany izaho sy ny vadiko, Hanimba ny tokantranonay koa. Azafady, mivavaha ho ahy, pasitera, mila ahy tokoa ny valim-bavaka nataoko fa nivady izahay nandritra ny 12 taona, miaraka amin'ireo olana rehetra voalaza etsy ambony ireo ary tena ratsy izy ireo.
Boyong Ali Seidu 8 aprily 2021 Amin'ny 4: 54 hariva
Manana olana amin'ny fifohana rivotra aho, ary ny rafi-pandevonan-kanina dia herinandro, manalefaka vola eo anoloan'ny tranoko foana ny fahavalo, na dia anio aza dia mila vavaka aho.
Fanasitranana amin'ny fanafahana 3 Mey 2021 Amin'ny 9:35 maraina
Black Magic dia natolotr'ireo mpamosavy ahy Dorothy Ann Farmer Angelia Levetta Farmer Regina Ann Farmer Winifred Boone Annie Mae Turner Edward Lee Jackson Lewis Herring Christina Wooten Dorothy S Williams Dorothy Cox Charles Alonzo Jones Benita Lowe Patricia Watts Glenda Davis Frederick Williams. Alefaso miverina amin'ny mpandefa. Mijoroa fa TSY mpamosavy velona
Kim Westerman 7 Mey 2021 Amin'ny 7:25 maraina
Mino aho fa mampiseho ahy amin'ny nofiko ny Tompo, misy olona milaza ozona famosaviana amiko. Nofinofiko ny hanana zaza, hiteraka zazalahy. Ny nofy iray hafa dia ny zanako lahy maty tamin'ny faha-2 taonany na 4 volana. Tao anatin'ny nofy dia nolazaiko tamiko ny vadiko taloha (izay mipetraka any Mexico ankehitriny) mba tsy hilaza amin'ny fianakaviany raha bevohoka indray aho satria misy olona ao amin'ny fianakaviany miteny mamosavy ahy. Mahatsapa aho fa izany no mahatonga ahy sahirana amin'ny diako miaraka amin'ny Tompo. Miteraha am-panahy dia maty izy. Mivavaha ho ahy ary ampahafantaro ahy ny fomba hamerenako ireo ozona ireo amin'ny mpandefa. Misaotra ary Ray Andriamanitra hitahy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.
Victor Misale 13 jona 2021 Amin'ny 7:13 hariva
Ny lehilahin'Andriamanitra manampy ahy amin'ny vavaka dia misy vehivavy sy lehilahy mampiasa ny miro hanapotehana ny fiainako izay tsy tian'izy ireo hambinina amin'ny fiainako.
tampoka Jiona 19, 2021 Ao amin'ny 8: 08 am
Saya menulis artikel ini untuk meminta terima kasih kepada Dr.Sago untuk mengingat kuatnya. Jeneng Ani, aku saka Serbia Dr.Sago sing bubar nulungi aku membawa bali kekasih sing wisar aku menjadi wanita liya tanpa ada sebab-sebab selama 8 tahun lalu. Setelah melihat pesanan dalam talian dari Jenna dari AS mengenai kepunyaan Dr.Sagoen mencuba anda, anda juga dapat mencari bantuan kerana tidak mempunyai pilihan, tetapi dapat menjangkau orang-orang yang suka kasih dan senang. Aku kaget sangat, orang-orang yang mau pulang di rumah dan mengesankan papan untuk meminta ati-ati, aku kaget sekali dan terkejut ketika kekasihku hanya mendapat permintaan dan aku akan diterima. Aku tidak memiliki ekspresi dan tidak tahu sepira anggone mengatur untuk meminta terima kasih kepada anda, Dr.Sago. Kamu sebagai Gusti Allah berangkat untuk mengembalikan hubungan yang telah rosak, dan sekarang saya menjadi wanita yang suka ceria. detail kontake dia; spellspecialistcaster937@gmail.com
Vavaka 30 ho an'ny varavarana misokatra sy ny lanitra misokatra
Novambra 28, 2018
Teboka vavaka hanoherana ny fahababoana
Oktobra 24, 2020
Teboka vavaka ho an'ny paska (fitsangatsanganana)
Aprily 5, 2021